निर्जीवन बीमा कम्पनीः आठ कम्पनीले गरे लाभांश प्रस्ताव, बाह्रको बाँकी ? - नेपालबहस
निर्जीवन बीमा कम्पनीः आठ कम्पनीले गरे लाभांश प्रस्ताव, बाह्रको बाँकी ?
| १०:५२:४५ मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । हालसम्म ८ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न थालेका हुन्। अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश गरेका छन्।
लाभांश प्रस्ताव गर्ने आठ निर्जीवन बीमा कम्पनी
सूचीकृत १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मध्ये शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेका छन्।
लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकि निर्जीवन बीमा कम्पनी
त्यस अनुसार हालसम्म नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, युनाईटेड इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल, जनरल इन्स्योरेन्सको अझै लाभांश आउन बाँकि छ।
कुन कम्पनीले गर्यो सबैभन्दा बढि लाभांश प्रस्ताव ?
हालसम्म लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीहरुमध्ये शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै २९.२३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले २७.७६९ प्रतिशत बोनस र १.४६२ प्रतिशत नगद गरी सो बराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
लाभांश प्रयोजनको लागि कम्पनीले फागुन २६ गते बुक क्लोज पनि गरिसकेको छ। त्यस अनुसार फागुन २५ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्रै कम्पनीको लाभांश पाउनेछन्।
कुन कम्पनीले गर्यो सबैभन्दा कम लाभांश प्रस्ताव ?
लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा कम हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले ३ प्रतिशत बोनस र ३.७५ प्रतिशत नगद गरी ६.७५ प्रतिशत मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेकाे छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ११.०५ प्रतिशत नगद लाभांश लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र ०.५३ प्रतिशत नगद गरी १०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले ८ प्रतिशत बोनस र २ प्रतिशत नगद गरी १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
एभरेष्ट र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले बराबर ८ प्रतिशत बोनस र ०.४२ प्रतिशत नगद गरी ८.४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ७ प्रतिशत बोनस र ०.३७ प्रतिशत गरी ७.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले ३ प्रतिशत बोनस र ३.७५ प्रतिशत नगद गरी ६.७५ प्रतिशत मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
नागरिक लगानी कोषले गर्यो शेयरधनीलाई लाभांश घोषणा २ हप्ता पहिले
उत्पादन बढाउन भकारो सुधार अभियानमा किसान २ मिनेट पहिले
गायिका रिनाको कस्तो माया जाल ४ मिनेट पहिले
सरकारले हठा्त अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दलहरुसँग परामर्शमा माओवादी केन्द्र ४ मिनेट पहिले
लेकाली भेगैमा सुनिलसँग उर्मिलाको रोमान्स ७ मिनेट पहिले
सौन्दर्य पेशाको भविश्य सुनौलो छ : वरिष्ठ सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित १२ मिनेट पहिले
दूध बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्रतर्फ जाँदै १४ मिनेट पहिले
शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द १५ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरिको मुनाफामा गिरावट आएसँगै घट्यो शेयरमूल्य १८ मिनेट पहिले
मध्यपहाडी लोकमार्गको क्रसर उद्योग १९ मिनेट पहिले
व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुदाँ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण अलपत्र १९ मिनेट पहिले
संसदकाे चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य ३० मिनेट पहिले
न्यायिक समितिमा साधन र स्रोतको अभाव ३१ मिनेट पहिले
भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि परीक्षा मिति सार्वजनिक ३२ मिनेट पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय ३३ मिनेट पहिले
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकार एकजुट हुनुपर्छ : महामन्त्री डा. कोइराला १ वर्ष पहिले
सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउन नेपालकाे प्रस्ताव १ वर्ष पहिले
जित्ने हैन त ? १ रुपैयाँमै डिमहोमको फाइबर नेट २ महिना पहिले
सुरक्षाकर्मीको सरुवाबढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न अख्तियारकाे सुझाव ४ महिना पहिले